Fedora Silverblue၊ စိတ်ဝင်စားဖွယ်မပြောင်းလဲနိုင်သော Desktop Operating System | Linux မှ
Linux Post Install လုပ်ပါ | 23/09/2021 06:00 | အဆင့်မြှင့်တင် 23/09/2021 12:17 | ဖြန့်ဝေ, GNU / Linux များ
ငါတို့စောစောကကတိပေးထားတဲ့အတိုင်းငါတို့ရဲ့ post မှာ«Fedora စီမံကိန်း၊ သင်၏အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်၎င်း၏လက်ရှိဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများကိုသိခြင်း«ဒီနေ့ငါတို့ခေါ်မယ့်သူ့ရဲ့ပရောဂျက်တွေဒါမှမဟုတ်တိုးတက်မှုတွေထဲကတစ်ခုကိုစူးစမ်းကြည့်မယ် "Fedora Bluesilver".
"Fedora Bluesilver" တစ် ဦး ဖြစ်ရန်ကြိုးစားသည် မပြောင်းလဲနိုင်သောလည်ပတ်မှုစနစ် (မပြောင်းလဲနိုင်သော) ကွန်ပျူတာများဖြစ်ရမည် GNU / Linux ရှိ workstations များ ၎င်းအားအသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အဆင့်မြင့်ပံ့ပိုးမှုကြောင့်အဓိကအားဖြင့် developer များနှင့်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံနှင့်သက်ဆိုင်သောပညာရှင်များကိုသုံးသင့်သည် ကွန်တိန်နာ.
ပျော်ရွှင်မှုရှာဖွေရန်စိတ်ဝင်စားသူများအတွက် ယခင်ဆက်စပ် post နှင့် Fedora Project နှင့်၎င်း၏ဖန်တီးမှုအမျိုးမျိုးဤပစ္စုပ္ပန်ထုတ်ဝေမှုကိုဖတ်ပြီးနောက်အောက်ပါလင့်ခ်ကိုနှိပ်နိုင်သည်။
“ Fedora Project ကမင်းပဲဟာ့ဒ်ဝဲ၊ တိမ်တိုက်များနှင့်ကွန်တိန်နာများအတွက်ဆန်းသစ်သော၊ အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ပလက်ဖောင်းသည် software အသုံးပြုသူများအတွက်နှင့်သုံးစွဲသူများအတွက်စိတ်ကြိုက်ဖြေရှင်းနည်းများကိုတည်ဆောက်ပေးနိုင်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်၎င်းသည် လွတ်လပ်၍ ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ဆော့ဝဲပလက်ဖောင်းတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်အတူတကွပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သောအသိုင်းအဝိုင်းဖြစ်ပြီးထိုပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်တည်ဆောက်ထားသောသုံးစွဲသူဗဟိုပြုဖြေရှင်းနည်းများကိုအတူတကွမျှဝေရန်ဖြစ်သည်။ Fedora စီမံကိန်း၊ သင်၏အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်၎င်း၏လက်ရှိဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများကိုသိခြင်း
1 Fedora Silverblue: ကွန်တိန်နာကို ဦး တည်သောလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်စံပြဖြစ်သည်
1.1 Fedora Silverblue ဆိုတာဘာလဲ။
Fedora Silverblue: ကွန်တိန်နာကို ဦး တည်သောလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်စံပြဖြစ်သည်
Fedora Silverblue ဆိုတာဘာလဲ။
ယခင်ပို့စ်တွင်၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ "Fedora စီမံကိန်း"အဲဒါကိုကျနော်တို့အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြပါရစေ "Fedora Bluesilver" es:
"ကွန်တိန်နာဗဟိုပြုလုပ်ငန်းအသွားအလာများအတွက်ကောင်းမွန်သောအထောက်အပံ့ပေးနိုင်ရန်မပြောင်းလဲနိုင်သော (မပြောင်းလဲနိုင်သော) desktop Operating System Fedora Workstation ၏ဤမူကွဲသည် developer အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်ရည်ရွယ်သည်။"
"Fedora Workstation ၏မူကွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ပုံမှန် desktop operating system တစ်ခုကဲ့သို့ပြုမူသည်၊ ၎င်းသည် standard Fedora workstation ကိုသုံးသောတွေ့ကြုံမှုနှင့်ဆင်တူသည်။"
မတည်မြဲမှုအကြောင်းပြောသောအခါ၎င်းကိုရှင်းလင်းပါ "Fedora Bluesilver" ရည်ညွှန်းသည်:
"Fedora Silverblue တပ်ဆင်မှုတစ်ခုစီသည်အခြားဗားရှင်းတပ်ဆင်မှုတိုင်းနှင့်တူညီသည်။ ဒစ်ခ်ပေါ်ရှိ Operating System သည်စက်တစ်လုံးမှအခြားတစ်ခုနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ပြီး၎င်းကိုအသုံးပြုနေစဉ်မည်သည့်အခါမျှမပြောင်းလဲပါ။"
ပိုမိုတည်ငြိမ်မှု၊ အမှားနည်းနိုင်ခြေကိုမပြောင်းလဲနိုင်သောဒီဇိုင်း ထို့ကြောင့်စမ်းသပ်ရန်နှင့်တိုးတက်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။
containerized applications များနှင့် container-based software development အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သော platform တစ်ခု
သင်၏အက်ပလီကေးရှင်းများ (အက်ပ်များ) နှင့်ကွန်တိန်နာများကိုအိမ်ရှင်စနစ်နှင့်သီးခြားထားရှိပြီးတည်ငြိမ်မှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကိုတိုးတက်စေသည်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက "Fedora Bluesilver" မင်းဆီကိုလည်ပတ်နိုင်တယ် download အပိုင်း အပေါ် "Fedora စီမံကိန်း"မရ။ ပြီးတော့သူ့အကြောင်း တရားဝင်အဓိကအပိုင်း လာမယ့်၌ link ကိုမရ။ အများကြီးရှိနေတဲ့နေရာမှာ ရရှိနိုင်စာရွက်စာတမ်းများ အထူးသဖြင့်၎င်း၏တပ်ဆင်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုအတွက် နှင့်ပတ်သက် နည်းပညာဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက် ၎င်းသည်၎င်း၏မပြောင်းလဲနိုင်မှုနှင့်အသုံးချနည်းပညာကိုရရှိစေသည် Toolbox ကို ၎င်းသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနှင့်နက်ရှိုင်းသောနားလည်မှုရရှိစေရန်ကွန်တိန်နာအသုံးပြုမှုကိုစီမံကွပ်ကဲသည်။
သေချာပါတယ်၊ "Fedora Bluesilver" အဆက်မပြတ်လိုအပ်နေသောသုံးစွဲသူများအတွက်ကြီးစွာသောဖန်တီးမှုတစ်ခုဖြစ်သည် အပလီကေးရှင်းများနှင့်စနစ်များကိုဖန်တီး / တပ်ဆင် / ပြောင်း / ပြောင်းပါ သင်၏ Operating System တွင် ကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းမရှိဘဲဤကဲ့သို့သောလုပ်ရပ်များကိုမကြာခဏလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းသည် Operating System ကိုဆိုးရွားစွာပြောင်းလဲစေခြင်း (သို့) ပျက်စီးစေခြင်း သုံးသည်၊ ၎င်းသည်အမှန်တကယ်ဖြစ်သည် တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောအပေါင်း အလုပ် (သို့) အရေးကြီးသောအလုပ်များနှင့်ပတ်သက်လျှင်
Y "Fedora Bluesilver" ငါ့ကိုအများကြီးစဉ်းစားစေတယ် Respines (တိုက်ရိုက်တပ်ဆင်နိုင်သောလျှပ်တစ်ပြက်ပုံများ) အခြား GNU / Linux Distros ကဲ့သို့ဖန်တီးထားသည် MX o AntiX.
အနည်းဆုံးတပ်ဆင်မှုသတ်မှတ်ချက်များအရ Respin တပ်ဆင်ခြင်း၏အဆုံးရလဒ်သည်အမြဲတူသည်။ ဆိုလိုသည်မှာဖန်တီးထားသောစနစ်၏အတိအကျမိတ္တူဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်မပြောင်းလဲနိုင်သော်လည်း၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Operating System ၏ပုံနှင့်ပုံသဏ္န်ဖြင့်ဖန်တီးထားသော ISO မှအမြန်တပ်ဆင်မှုကိုခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းကိုရယူပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပြုရန်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့အမြဲသုံးလိုသည့်အတိုင်းပြန်လည်ရယူပါ။
တိုတိုပြောရရင် "Fedora Bluesilver" လက်ရှိတွင်စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးဖန်တီးမှုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် "Fedora စီမံကိန်း"မရ။ ၎င်းသည်အလွန်အမင်းကြိုးစားသည် တည်ငြိမ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသော como အလုပ်လည်ပတ်မှုစနစ်အထူးသဖြင့်ထိုပညာရှင်များအတွက် developer များနှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာကိုအာရုံစိုက်သောသူများအတွက် ကွန်တိန်နာ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » ဖြန့်ဝေ » Fedora Silverblue၊ စိတ်ဝင်စားဖွယ်မပြောင်းလဲနိုင်သော Desktop Operating System
ကျွန်ုပ်သည် Silverblue သုံးစွဲသူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးအမှန်မှာ၎င်းသည်သာမန် distro ကိုသုံးခြင်းနှင့်မတူပါ။ ၎င်းကိုစီမံရန်နည်းလမ်းသည်လုံး ၀ ကွဲပြားသည်၊ Silverblue သည် linux distros များ၏အနာဂတ်ကိုငါစဉ်းစားသည်။
မင်္ဂလာပါပေါလု မင်းရဲ့မှတ်ချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အဲဒါကိုမင်းကြိုက်တယ်ဆိုလို့ငါအရမ်းဝမ်းသာပါတယ်။ အဲဒါကိုနောက်ထပ်စမ်းသပ်ဖို့ MV တစ်လုံးမှာအလုပ်လုပ်ဖို့ငါမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ MV မှာအလုပ်မလုပ်ဘူးထင်တယ်၊ ဟုတ်တယ်မလား။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်တော်အဲဒါကို MV ထဲမှာတစ်ခါမှမတပ်ဆင်ဖူးပါဘူး။ ငါ့မှာ pc များစွာရှိသည်၊ တစ်လုံးတွင်ငွေရောင်ရှိသည်။
ငါ virtual machine တွေပြဿနာတွေအကြောင်းဖတ်ခဲ့ရင်တောင်မင်း Boxes ထဲမှာအဲဒါကို virtualize လုပ်ချင်လားငါမသိပေမယ့် YouTuBe မှာလူတစ်ယောက်က silverblue ကို install လုပ်ပြီးအလုပ်လုပ်တယ်၊ မင်းကြည့်ချင်လားငါမသိဘူး။ မင်းအတွက်အဆင်ပြေလားဆိုတာကြည့်ပါ။ https://www.youtube.com/watch?v=AeNKlIizUFc
မင်္ဂလာပါပေါလု မင်းရဲ့မှတ်ချက်နဲ့ပံ့ပိုးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဗွီဒီယို၏ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်းလိုက်နာပြီး VirtualBox နှင့်ထပ်မံကြိုးစားပါ။ ပြီးရင် Boxes စမ်းကြည့်မယ်။